सासूलाई निक्कै माया गर्छन् यी बलिउड अभिनेत्रीहरु - Forseenetwork : Nepalko entertainment web site : nepali cinema & Gossip : nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : nepali art ,music , manoranjan & more
१४ भदौ,२०७३ | Agency
loading... बलिउड अभिनेत्री आफ्नो काम जति राम्ररी गर्छन्, घर परिवार पनि उत्तिकै राम्ररी हेर्छन् र चलाउँछन् । उनीहरु परिवारका सबै सदस्यसँग राम्रो सम्बन्ध राख्छन् । विशेष गरी, आफ्नो सासू सँग । आज हामीले बलिउडका सासू बुहारी बारे एक सामाग्री तयार पारेका छौं ।
१. करिना कपूर र सासू शर्मिला टैगोर
करिना आफ्नो सासूलाई “अम्मा” भनेर बोलाउँछिन् । खासमा सैफ आफ्नी आमालाई अम्मा भनेर बोलाउने गर्छन्। यही कारण उनी पनि त्यही भन्छिन्। आमालाई तामिल भाषामा अम्मा भनिन्छ । करिना सासू शर्मिलालाई आफ्नी आमा बबितालाई झैं माया गर्छिन्।
करिना भन्छिन्, “अम्मा लिजेन्डरी स्टार हो। म उहाँको ठूलो फ्यानहुँ।”
२. ऐश्वर्या राई र सासू जयाबच्चन
बलिउडमा जया र ऐश्वर्याको राम्रो नाता छ । जयालाई अरुले ऐश्वर्याको कुरा गरेको मन पर्दैन । एकदिन ऐश्वर्या र जया सँगै एक पार्टीमा गए । त्यहाँ एक फोटोग्राफरले उनलाई “एशएश” भनेर बोलाएको थिए । ऐश्वर्यालाई त्यसरी बोलाएको जयालाई मन परेन । उनले ती फोटोग्राफरलाई किन एशएश गरेर बोलाउनु भएको । एशवर्या जी अथवा मिसेज बच्चन भन्नुस्भनिन् ।
३. रानी मुखर्जी र सासू पामेला चोपडा
रानीले फिल्म निर्देशक आदित्य चोपडासँग विवाह गरेकी हुन्। विवाह पछि पहिलो पटक उनलाई सासूसँगै पब्लिकमा देखिएकी हुन्। उनीहरु प्राय पार्टीहरुमा सँगै देखिन्छन् ।
४. जेनेलिया डिसूजा र सासू वैशाली देशमुख
जेनेलिया डिसूजा सासू वैशाली सँग धेरै पार्टीमा देखिने गर्छिन्। उनीहरु साथी जस्तै छन् । वैशालीलाई जेनेलियाको सजिलै घुलमिल हुने बानी निक्कै मन पर्छ । अहिले जेनेलिया छोराहरुको रेखदेखमा व्यस्त छिन् ।
५. नीतू कपूर र सासू कृष्णा कपूर
नितू कपूर र सासू कृष्णा कपूरको नाता पनि निकै राम्रो छ। कृष्णालाई नितूले बनाएको खाना निकै मनपर्छ। उनी नितूले बनाएको खानाको खुलेर तारिफ गर्छिन्। नितू पनि कृष्णाका बारेमा खुलेर तारिफ गर्छिन्।
६. सोनाली बेन्द«े सासू मधु बेहेल
सोनाली आफ्नो सासूलाई एकदम माया गर्छिन् र नम्र व्यवहार गर्छिन् ।उनी आफ्नो सासूलाई आमा सरह सोच्छिन्। उनीहरु साथी सरह एक अर्का समय बिताउँछन्।
७. काजोल र सासू बीना देवगन
काजोल र उनकी सासू बीना बीच राम्रो सम्बन्ध छ । फिल्म दिलवाले को सुटिङका लागिका लोज बुल्गेरिया जानुपर्यो । त्यसबेला काजोलका छोराछोरीको पुरै जिम्मा उनकी सासू बीनाले लिइन् । काजोल १५० दिनका बुल्गेरिया गएकी थिइन् ।
तस्वीरमा हेर्नुहोस् बलिउड अभिनेत्रीहरु, विवाहमा को धेरै राम्रो ?
अभिनेत्री प्रिटी जिन्टाले विवाह गरेको ६ महिना पछि आफ्ना विवाहका तस्वीरहरु सार्वजनिक गरिन् । फोटोमा उनी आफ्ना पति जीन गुडइनफसँग निकै सुन..
टेलिसिरियल ‘नागिन’ बाट चर्चामा आएकी अभिनेत्री मौनी रोय यतिबेला लण्डनमा अक्षय कुमारसँग ‘गोल्ड’को छायाकंन गरिरहेकी छिन् । मौनी यहि सिनेमा..
बाहुबलीको नक्कल गर्दा एक व्यापारीले गुमाए ज्यान
नसीरुद्धिन शाह ६८ औ जन्मोत्सव मनाउदैः केहि रोचक खुलासा
प्रभासले घटाए १० किलो तौल